Ahoana ny fiasan'ny Tabex?
Tabex dia vokatra fitsaboana amin'ny sigara. Azafady mba fantaro fa tsy zava-mahadomelina izy io, na izany aza, vokatra voajanahary voajanahary tanteraka vita amin'ny fakana zavamaniry. Azo vidiana izy io raha tsy misy fanafody. Ny fahalianana manerantany dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fahombiazany.
Tabex dia misy fiantraikany lehibe amin'ny mekanika pathogenetic ny fiankinan-doha amin'ny nikôtinina:
Ny cytisine alkaloid dia mpanohitra mahery ny mpandray ny nikôtinina.
Ny cytisine dia manana fitsaboana isan-karazany kokoa noho ny nikôtinina izay mahatonga ny mombamomba ny hetsika ho azo antoka kokoa.
Ny cytisine dia mampihena ny soritr'aretina mahakivy mifandraika amin'ny fampitsaharana ny fahamamoan'ny nikôtinina.
Raha ampitahaina amin'ny nikôtinina, dia misy vokany malemy kokoa amin'ny rafi-pitabatabana peripheral sy ny tosidrà
Ao anatin'ny atidohanao
Cytisine dia agonista an'ny cholinoreceptors avy amin'ny ganglia vegetative ary ao amin'ny vondrona fanafody gangliostimulate. Mampientanentana ny kôlônina tena azo tsapain-tanana ny kôlamidia fibra ao amin'ny ganglia maniry, ny sela chromaffin any amin'ny tapany molekiola ao amin'ny fihary suprarenal sy ny faritra reflexogenik sinocarotid, izay miteraka fientanam-po amin'ny foibe taovam-pisefoana, indrindra ireo reflexes, fanahafana ny famotsoran'ny adrenaline ny ny lafiny medullary ny fihary suprarenal ary fitomboan'ny tosidra. Taorian'ny fakana azy avy amin'ny lalan-kibo, ny cytisine dia mitana ny andraikitry ny fanoloana sigara izay mampihena ny vanim-potoanan'ny fifandraisana eo amin'ny fifohana sigara sy ireo mpandray.
Izany dia mitarika amin'ny fihenan'ny tsimokaretina sy ny fitsaharan'ny mpifoka sigara ary ny fiankinan-doha amin'ny nikôtinina amin'ny vatana. Mpikaroka maro no manamafy amin'ny fanandramana ara-panafody isan-karazany ny fifandraisana misy eo amin'ny zava-mahadomelina cytisine sy paraky, araka ny nofaritan'i Dale & Laidlaw ary koa tohanan'ny fehin-kevitra matanjaka kokoa noho ny famporisihan'ny ganglion fa tsy ny ganglioblocking Zachowsky, Anichkov, Dobrev ary Paskov, Daleva, sns. .matanjaka kokoa noho ny mamporisika ny ganglion fa tsy ny ganglioblocking mahery vaika kokoa noho ny mamporisika ny ganglion toy ny mpanao broker ganglioblocking. Ny vokatra azo ampitahaina amin'ireo zava-mahadomelina roa dia azo tamin'ny fanandramana amin'ny fifohana sigara sy ny cytisine dia be lavitra noho ny kalitao. Ny vokatra azo ampitahaina amin'ireo zava-mahadomelina roa dia azo tamin'ny fanandramana tamin'ny voalavo sy saka, na amin'ny guinea pig ileum sy diaphragm rat, ny fatran'ny cytisine dia 1/4 ka hatramin'ny 2/3 avy amin'ny doka fifohana. System, Cytisine dia manana rafi-pitatitra malemy kokoa, ny Cytisine dia misy fiantraikany malemy kokoa amin'ny fampitahana ny rafi-pitatitra.
Ahoana ny fampiasana Tabex Fandinihana klinika momba ny Tabex Momba ny Hazo Laburnum